La xiriir Soo-saareyaasha Kaararka Chip Ic - Shiinaha La Xiriir Shirkadaha Kaarka Chip Chip & Warshad
Kala xiriir ic chip card
Kaarka la xiriir IC waa soo gaabinta kaarka wareegga isku-dhafan. Waa kaar caag ah oo lagu dhejiyay jajabyo wareegsan. Qaabkeeda iyo cabirkeeduba waxay waafaqaan heerarka caalamiga ah (ISO / IEC 7816, GB / t16649). Intaa waxaa dheer, waxay isticmaashaa microprocessor, ROM iyo xitaa xusuusta aan isbeddelayn. Kaarka IC ee leh CPU waa kaarka casriga ah ee dhabta ah.
Waxaa jira saddex nooc oo kaarka IC xiriir ah: kaarka xusuusta ama kaarka xusuusta; kaarka casriga ah ee wata CPU; kaarka super smart la kormeeraha, keyboard iyo processor. Waxay leedahay faa'iidooyinka awoodda keydinta ballaaran, amniga adag iyo fududahay in la qaado.
Maskaxdu waxay keentaa dhammaan noocyada kaarka Ic chip kaarka oo ay ku jiraan 4428 contact ic chip card, 4442 contact ic chip card, TG97 contact ic chip card iyo xoogaa kaarka CPU ah oo ammaankiisu sarreeyo EAL5, EAL 5+, EAL 6, EAL 6+ oo leh 80KB ama 128KB cabbirka EEPROM.